PressReader - Ilanga: 2017-11-09 - UKHALA NGOMNYANGO UMCULI ONGENAMAZISI
UKHALA NGOMNYANGO UMCULI ONGENAMAZISI
Ilanga - 2017-11-09 - Izindaba - PAMELA ZUNGU
SEKUPHELE iminyaka eyisihlanu umculi wereggae, uMaqhawe "Truckerman" Ngcobo (49), waseMandeni, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal engenawo umazisi emuva kokutshelwa ngaboMnyango wezaseKhaya KwaDukuza, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal ukuthi ungowaseMozambique.
Lo mculi odume ngengoma ethi "Truckerman" nethi "Message on the Phone", uthi ulahlekelwe wumazasi wakhe ngowezi-2013.
Uthi sesiside isikhathi ewubhalisela kodwa ungabuyi njengoba kuthe ngowezi-2015 wabuya unemininingwane yakhe kodwa kunobuso bowesifazane omhlophe.
"Kangikwazi ukwenza lutho ngenxa yalobu budedengu (bezisebenzi zomnyango).
"Ngilokhu ngenhla ngenyuka emahhovisi akwandabazabantu kodwa usizo kangilutholi. Njengoba ngingumculi ngiyaqashwa ezindaweni eziningi, kwesinye isikhathi kuke kudingeke umazisi ngoba ngike ngiqashwe nasemazweni angaphandle.
"I- passport yami isidlulelwe yisikhathi, kangikwazi ukuyivuselela ngenxa yale nkinga. Kangisazi nokuthi sengiwushaye izikhathi ezingaki umazisi kodwa kakulungi lutho, kunalokho ngilokhu ngikhokha imali yokuwubhalisela.
"Sengize ngaludlulisela ePretoria udaba lwami kodwa lutho namanje,” kusho uTruckerman.
Kuyimanje lo mculi uzama ukusiza umfanyana oyintandane ukuze abe ngaphansi kwephiko lakhe - okuzohamba kube nzima ukuba isifiso sakhe sokuba ngumzali kulo mfana njengoba engenawo umazisi.
UMaqhawe ngomunye wabaculi abebeqokwe emncintiswaneni wezindondo, iSouth African Traditional Music Achievement Awards (Satma) nonyaka.
Okhulumela uMnyango wezaseKhaya KwaZulu-Natal, uMnu Cyril Mncwabe, uthe: “Umnyango uyazwelana noMnu Ngcobo ngokwenzikile, luzophenywa kabanzi lolu daba ukuze asizakale, akwazi ukuqhubeka nempilo.” phumelela@ilanganews. co.za
NGUMCULI we-Reggae uMaqhawe Ngcobo okhala ngokwenzelwa phansi nguMnyango wezaseKhaya KwaDukuza osekuphele iminyaka eyisihlanu egqigqa kuwona ngodaba lukamazisi. Uthi kulo mnyango bayalandula, bamtshela ukuthi ungowaseMozambique.